mySQL server in window7Home Premium - MYSTERY ZILLION
mySQL server in window7Home Premium
July 2011 edited July 2011 in Database
How can I install mySQl server in window7Home Premium. Please help me. I was now use in window7Home Premium. It'salicense version then I dun wanna uninstall it. Plz give me the way.
I do not understand. What is your difficulties?
ကျွန်တော့်စက် မှာတင်ထားတဲ့ OS က window7Home Premium ပါ။ Database တွေဆောက် Pl/SQL တွေရေးဖို့အတွက် ကျွန်တော် oracle version မျိုးစုံတင်ကြည့်ပါတယ်။ သွင်းလို့မရပါဘူး။ operation system error ပဲပြပြီးသွင်းလို့မရလို့ လက်လျှော့ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် mySQL server 2000 ၊ mySQL server 2008 ဆက်ပြီးသွင်းကြည့်ပါတယ်။ မရဘူး အကိုရ။ အခုကျွန်တော် ကျောင်းက Project တစ်ခုမှာ leader လုပ်နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Database တွေဆောက်လို့မရလို့ တော်တော် တိုင်ပတ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ ကူညီပါဦးဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲ လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။
Operation System Error က mysql မှာ ဖြစ်နေတာလား။ Windows7Home Premium မှာဆိုရင်တော့ MSSQL server သုံးလို့ရချင်မှ ရလိမ့်မယ်။
Oracle ဆိုရင်တော့ http://blog.mclaughlinsoftware.com/2009/11/27/oracle-11g-on-windows-7/ ကို တချက်လောက် ဖတ်ကြည့်ပါ။
MySQL သွင်းမရဘူးဆိုရင် Xammp ကို စမ်းကြည့်ပါ။ mysql တစ်ခါတည်း ပါပြီးသားမို့ သူနဲ့ဆို အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။
အသုံးအနှုန်းမှားနေတယ် ခင်ဗျားဆိုလိုတာက mySQL ဆိုတာ Microsoft SQL Server လို့ပြောချင်ပုံရတယ် အဲဒါဆိုရင် MS SQL လို့ ပြောရပါတယ် MySQL ဆိုတာ သပ်သပ်ရှိနေတယ်။ Microsoft SQL Server ဆိုရင်တော့ Home Premium မှာတင်ချင်ရင် Developer Edition ကိုလိုက်ရှာပါ Standard, Enterprise, Data Center Editions တွေက Windows Home Editions တွေမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။